Mino Raiola oo dabka kusii shiday mustaqbalka Paul Pogba ee kooxda Manchester United – Gool FM
Mino Raiola oo dabka kusii shiday mustaqbalka Paul Pogba ee kooxda Manchester United
(Manchester) 26 Sab 2018. Wakiilka xidiga kooxda Manchester United ee Paul Pogba ee Mino Raiola ayaa wuxuu dabka kusii shiday mustaqbalka xidiga uu dalaalka ka yahay, kadib markii uu iska diiday inuu ka hadlo wararka ku aadan inuu ku biiriyo Barcelona.
Wargeyska “The Sun” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Mino Raiola uu iska diiday inuu beeniyo dalabka Pogba kaga yimid kooxda reer Spain ee Barcelona, kadib markii uu joogta noqday khilaafka kala dhexeeya Jose Mourinho.
Mino Raiola ayaa kadib marka wax laga weydiiyay in laacibka reer France ee Paul Pogba uu ka tagayo kooxda Manchester United, wuxuuna kaga jawaabay “Ma jiraan wax faalo ee aan ka bixinayo”.
Hadalka wakiilka xidiga kooxda Manchester United ee Paul Pogba ee Mino Raiola ayaa wuxuu dabka kusii shiday shakiga ku aadan in laacibka reer Franca uu ka dhaqaaqi doono safka Red Devils.
Safafka rasmiga ah ee Arsenal vs Brentford (Unai Emery oo ku soo bilaabay wajiyo cusub)
Shaxda rasmiga ah ee Juventus vs Bologna